Ithegi: impikiswano | Martech Zone
NgoLwesibini, Juni 2, 2020 NgoLwesibini, Juni 2, 2020 Douglas Karr
Oku kube ziinyanga ezimbalwa ezinzima kwisizwe sethu. Unyulo, i-COVID-19, kunye nokubulawa ngokumasikizi kukaGeorge Floyd zonke ziye zangenisa ilizwe lethu emadolweni. Andifuni mntu okholelwa ukuba eli linqaku le-boo-hoo. Ukuba sonwabile ukudibanisa kunye kwi-Intanethi, uyazi ukuba ndiyiphathe njengomdlalo wegazi. Ukususela kwiminyaka emincinci yokuhlala kwikhaya elahlulwe yinkolo kunye nokuthanda ezopolitiko, mna